Stainless Simbi Flange
Chiwanikwa Simbi Flange
Carbon Simbi Flange
Jiangyin Puyang Heavy Maindasitiri CO., LTD
ne admin pane 2021-02-02
Kana iko chaiko kukanganiswa kwekuonekwa, kukanganisa kwekuona, kuwanda, kuongorora uye zvichingodaro zvikagadziriswa, muzviitiko zvakawanda zvinoshandisa chiyero chinoenderana, kujekesa mamiriro aya, uye edza kubatanidza nezvinoitwa nemushandisi. Ultrasonic kuona kweakakura shaft kukanganwa, iyo 2 ~ 3 ...
Yekutanga maitiro uye mashandiro emahara ekuchengetedza
Maitiro anogona kushandura chimiro uye saizi yema billet zvakanyanya achienzaniswa nechinyorwa chinoshanda zvakare ndiyo huru deformation maitiro mune emahara ekugadzira maitiro. Zvakadai se: Iyo yekutanga maitiro 1) Upsetti ...
Flange bhaudhi maburi
Flange bhaudhi gomba nhamba uye bhaudhi gomba dhayamita zvinotsanangurwa. Huwandu uye dhayamita yemaburi emabhaudhi e flange anosiyana pamwe neiyo flange yekumanikidza kirasi, asi mhando dzese dzemafuru mune imwechete yekumanikidza kirasi yakafanana. Flange bhaudhi maburi akarongedzwa pane bhaudhi gomba dhayamita uye ...